Frequently asked questions about social distancing (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about social distancing (isiXhosa)
Yintoni umgama phakathi kwabantu?
Umgama ophakathi kwabantu (ngamanye amaxesha waziwa ngokuba ngumgama ophakathi kwakho nomnye umntu - ‘Physical distancing’) kumalunga nokugcina umgama ofunekayo phakathi kwabanye abantu ukuze unciphise ukusulelwa yiCovid-19.
Umgama ophakathi kwabantu ukwanciphisa amathuba okubambana nomntu obethe wabambana nabantu abaninzi abohlukeneyo, ngokwenza oko unciphisa amathuba okufumana le vayirasi. Oku kumalunga nomgama ophakathi kwabantu. Ukwenzela ungaphazamiseki kufuneka usoloko uqhagamshelana nezihlobo nosapho lwakho ngefowuni nomqhafazo (sms). Musa ukusondela kwiimeko apho umntu aza kuthi asondelelane nomnye bajongane ebusweni nisondelelane ngokokude umgama ube ngaphantsi kwe1.5 yeemitha.
Ukubakho komgama phakathi komntu kunye nomnye umntu yeyona ndlela ibalulekileyo kumntu wonke ekungafunekanga azivavalele yedwa enganceda ukunqanda ukusasazeka kwe-Covid-19. Nceda ujonge kwisikhokelo sethu ku staying at home and self-isolation nukufumana iinkcukacha ezithe vetshe.
Ngubani ekufuneka ekude komnye?
Ukuze sinqande ukunwenwa kweCovid-19, ukumiswangxi kwezinto kuthetha ukuba wonke umntu eMzantsi Afrika makahlale ekhaya. Ukuba kufuneka ukuba uphumile endlwini kufuneka umgama phakathi kwakho nomnye umntu uwugcine kangangoko unako ukuzama ukunqanda ukuthetha nijongene kwaye nisondelelene kunye nezihlobo zakho nosapho, ingakumbi ukuba:
uneminyaka engaphaya kwama-70
uhleli unezigulwana zakho